Hab sidee ah ayaa loo qiimeeyn dhimista wasakhda cimilada - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Wasakhda cimilada lagu sii daayi (Sawirle: Marc St. Gil/Flickr)
Hab sidee ah ayaa loo qiimeeyn dhimista wasakhda cimilada
23% ayuu dalkan dhimey wasakhda cimilada
La daabacay fredag 24 oktober 2014 kl 14.00
Dalka Iswiidhen ayaa dhimay 23% wasakhda uu dalkani cimilada ku sii daayo wixii ka dambeeyay 1990, sida lagu sheego tira-koobyada rasmiga dawliga ah. Hase yeeshee ma yahay sawirkaasi mid xaqiiqda ka tarjumaya? Waa fikir aanu qabin Glenn Peters oo ka howl-gala machadka cilmi-baarista ee Cicero:
- Qiimeeynta siyaasadda ee wasakhda hawada lagu sii daayo ayaa maanta lagu xadidaa oo keliya waddammada uu dhaqaalahoodu sarreeyo. Waa mid ay xaqiiq ahaan ku dhimi karaan kolka ey sancooyin waddammo kale lagu sameeyey ka soo waaridaan, halkii ey iyagu ka soo saari lahaayeen. Hab kale ee loo qiimeeyo ayaa noqon kara in la xisaabiyo alaabtka dalka laga isticmaalo iyo saameeynta ey cimilada ku yeesheen sameetooda.
Glenn Peters, oo ka howl-gala machadka cilmi-baarista Cicero ee dalka Noorway, ayaa ku baaqaya hab kale ee loo cabiro wasakhda hawada lagu sii daayo iyada oo la adeegsaneyo qaabka xisaabta ee alaabada dal laga isticmaalo, meel walba oo lagu soo sanceeyey.
Dhaleeceeynta iminka loo soo jeediyey ayaa ku saleey-san habka qiimeeynta wasakhda hawada lagu daayo, iyada oo la eego oo keliya alaabooyinka iyo adeegyada dalka laga soo saaro. Hase yeeshee aan la eegin saameeynta ey cimilada ku yeeshaan alaabooyinka dalka laga isticmaalo ee waddammada kale lagu farsameyo, isla-markaana wasakhda ku sii daaya cimilada guud ee caalamka.
Ururka khasnadda dabeecadda caalamiga oo war-bixin dhowaantan sii daayay ayuu dalka Iswiidhen ka mid noqday tobanka waddan ee ugu sarreeya ee isticmaala alaabooyinka ugu badan kolka loo eego tirada bulshada.
Kolka la eego habka iminka wax loo cabiro ayuu dalka Iswiidhen kaalin wanaag-san kaga jiraa marka loo barbar-dhigo wasakheeynta cimilada ee waddammada galbeedka Yurub, waxaase middaa ugu wacan habka wax loo cabiro. Madaama alaabooyin badan oo dalkan laga isticmaalo soo saarkooda loo wareejiyey waddammo dalkan ka bax-san, sida uu sheegay Glenn Peters:
- Wasakhda dalkani hawada ku sii daayo ayaa ka hooseeya marka loo barbar-dhigo waddammada kale ee xubnaha ka ah ururka Midowga Yurub EU, middaasina ugu wacan tahay soo saarka alaabooyin badan oo tamarta lagu isticmaalo aaney wax-yeelo u lahayn cimilada. Hase yeshee ey dhanka kale jiraan alaabooyin badan ee dibadda laga keeno oo soo saarkoodu wax-yeeleeyo cimilada. Qaasatan waxaa kor u kacay alaabooyinka dalkan la keeno oo lagu sanceeyo dalka Shiinaha oo kor u sii kacayay tobankii sannadood ee ugu dambeeyey.
Amuurtaa ayaan la isku raacsaneyn iyo in habka wax loo qiimeeyo iminka uu yahay mid aan wanaag-saneyn. Linda Sahlén Östman, oo ah dhaqaale yahan dhanka cimilada, kana howl-gasha mac-hadka saadaalinta dhaqaalaha ayaa qabta in loo baahan yahay in lagu xisaabtamo in aanu iminka jirin heshiis caalami ah oo la xiriira dhimista wasakheeynta cimilada:
- Dhibaatadu maahan in si khaldan wax loo cabiro ama qiimeeyo iminka, hase yeeshee waxay caqabaddu iminka tahay inaanu jirin heshiis guud ee caalami ah oo laga wada gaarey. Waa midda jah-wareerka dhalineysa. Waxaa caalamka ku sii kordhaya wasakhda cimilada lagu daayo iyo waddammada EU oo qaba rajooyin ka wanaag-san iney dhankooda ka dhimaan wasakhda, waa waxyaabaha dhaliya doodaha noocaasi ah.
Linda Sahlén Östman ayaa sidoo kale dhaleeceeysay in su'aasha sidaa loo dhigo. In laga doodo xadidaadda ganacsiga xuduuddaha iyo sidii wax looga qaban lahaa, ma ahan dhabbo wanaag-san ee xal looga gaari karo middaa, sida ay sheegtay:
- Ma ahan wax u cad caalamka oo dhan in wasakhda hawada lagu sii daayo loo qaybsado habka loo isticmaalo alaabooyin, waa war-bixin xiise yelan karta. Hase yeeshee dhibaatadu waxay tahay sidee xal loogu heli karaa middaa. Maxayse ku xiran tahay? Haa, run ahaan ganacsiga kor u kacay. Iyo go'aannada degdegga ah ee la iska gaaro. Waxaase loo baahnaan lahaa in la xujeeyo arrinka oo farta la saaro halka nabarku ka buko, iyo sidoo kale in laga doodo xalku halka uu ku jiro. Hase yeeshee sida iminka wax loo dhigeyo waa mid sii haligaysa xaaladda ee maahan mid xal u keenaysa, sida ay sheegtay Linda Sahlén Östman, ahna dhaqaale yahan dhanka cimilada.